Naaton’i Iràna Ireo Fanamelohana Ho Faty An’arivony Mifandraika Amin’ny Zava-mahadomelina Taorian’Ireo Taona Maro Nisoloana Vava Ny Zon’Olombelona · Global Voices teny Malagasy
Naaton'i Iràna Ireo Fanamelohana Ho Faty An'arivony Mifandraika Amin'ny Zava-mahadomelina Taorian'Ireo Taona Maro Nisoloana Vava Ny Zon'Olombelona
Voadika ny 11 Febroary 2018 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, polski, عربي, Italiano, Deutsch, বাংলা, 日本語, English
Iraniana mpiambina mijoro eo akaikin'ny vona mikirozaroza mandritra ny fanatonana ampahibemaso ao Iràna. Sary an'ny Ivontoerana Fiarovana Zon'olombelona ao Iràna
Hitanareo eto ambany ny ampahany navoaka avy amin'ny lahatsoratra nipoitra tao amin'ny tranonkalan'ny Ivontoerana Mpiaro zon'olombelona ao Iràna.
Vinaina ho manodidina ny 4 000 ireo miandry ny fanamelohana azy ho faty amin'izao fotoana izao noho ny heloka bevava mifandraika amin'ny zava-mahadomelina ao Iràna no mety hahazo famotsorana, ho tohin'ny didim-panjakana mifototra amin'ilay lalàna vao nasianàa fanitsiana mikasika ny fanondranana antsokosoko zava-mahadomelina ao amin'ny firenena.
Ny didim-pitsarana navoakan'ny Lehiben'ny Fitsaràna, Sadegh Larijani, tamin'ny 9 Janoary 2018, no nanafoana ny sazy fanamelohana ho faty mikasika ny heloka bevava mifandraika amin'ny zava-mahadomelina mbola miandry ireo fitsaràna ary mitaky amin'ireo mpitsara mba hanafoana ireo fanamelohana ho faty izay tsy mahafeno ireo fepetra vaovao nankatoavin'ny Parlemanta mikasika ny fanamelohana ho faty.
Ny 14 Oktobra 2017, ny Filankevitr'ireo Mpiambina, izay manara-maso ireo lalàna raha toa ka mifanaraka amin'ireo foto-kevitra silamo, no nankato ilay fanitsiana Lalàna manohitra ny fanondranana antsokosoko ny zava-mahadomelina taorian'ny nahalany azy io tao amin'ny Parlemanta na teo aza ireo ezaky ny masoivohon'ny fiarovana mba hampitsaharana ilay volavolan-dalàna.
Nipoitra taorian'ireo taona fanentanana tao amin'ny firenena sy iraisam-pirenena mikasika ny fiarovana zon'olombelona ilay fivoarana. Manana ny taha iray isaky ny mponina izay avo indrindra manerantany i Iràna mikasika ny fanamelohana ho faty. Olona maherin'ny 500 no novonoina tamin'ny taona 2017, ny be indrindra amin'ireo heloka faran'ny kely mifandraika amin'ny fanondranana antsokosoko ny zava-mahadomelina, anisan'izany ny fitondrana ny lanja faran'izay kely indrindra amin'ireo zava-mahadomelina tsy ara-dalàna.
Olona manodidina ny 5 000 no hita niandry fanamelohana ho faty mialohan'ny didim-pitsaràna momba ireo heloka bevava mifandraika amin'ny zava-mahadomelina, latsaky ny 30 taona avokoa ny ankamaroan'ireo voaheloka. Ny Angondrakitry ny Ivontoerana Fiarovana Zon'olombelona ao Iràna dia mampiseho fa tao anatin'ny 12 volana mialohan'ny fandalovan'ilay fanitsiana ny lalàna tamin'ny volana Oktobra 2017, fara-fahakeliny olona 270 no novonoina noho ny heloka bevava mifandraika amin'ny zava-mahadomelina, izay tsy azo saziana intsony amin'ny fanamelohana ho faty.
Mpikambana fahiny tao amin'ny Parlemanta ao Teheran, Ali Akbar Mousavi Khoeini, no nilaza tamin'ny Ivontoerana Mpiaro Zon'olombelona ao Iràna izay nampiany nikarakara ireo fivoriana teo amin'ireo manampahefana avy amin'ny Firenena Mikambana misahana ny zon'olombelona sy ireo manampahefana amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelina ao Iràna:
Hitako ho toy ny fambara tsara io. Tara ny fahatongavany, saingy hamonjy ny ain'ireo olombelona maro foana izy io. Mahafaly ahy ny milaza fa nitondra ho amin'ireo fanapahankevitra manatsara zavatra avy amin'ny Parlemanta sy ny fahefam-pitsaràna mitsinjo ny hampihenana ireo fanamelohana ho faty ireny ezaka ireny.
Noho ilay lalàna navaozina, tsy azo avoaka ny fanamelohana ho faty raha tsy ho an'ireo fanamelohana mifandraika amin'ny zava-mahadomelina misy idiran'ny:
fanondranana antsokosoko mitam-piadiana ny zava-mahadomelina
fitànana ny loha-laharana eo amin'ny fikarakarana sy ny famatsiambola mikasika ny fanondranana antsokosoko ny zava-mahadomelina, anisan'izany ny fanondrànana ankizy;
sazy fanamelohana ho faty tany aloha, famonjàna mandramaty, na ireo sazy efa maherin'ny 15 taona;
ary ny fanànana na fitondrana zava-mahadomelina ‘opium’ maherin'ny 50 kilao sy ireo “zava-mahadomelina mahazatra” hafa, ‘heroine’ roa kilao, na telo kilao amina ‘methamphetamine’.
Nanambara ny filoha lefitry ny kaomisiona ao amin'ny parlemanta iraniana misahana ireo raharaha ara-pitsaràna sy ny lalàna, Yahya Kamalipou, tamin'ny 30 Oktobra 2017 fa:
Araka ireo vinavinanay, gadra 4 000 amin'ireo 5 000 voaheloka taminà raharaha mifandraika amin'ny zava-mahadomelina no ho avotra amin'ny fanamelohana ho faty. Efa mpitsara sy mpampanoa lalàna aho nandritra ny 20 taona, noho izany haiko tsara ny zavatra atrehan'ireo voafonja sy ireo fianakaviany.
Ny sivy folo isan-jato amin'ireo voaheloka ho faty noho ny heloka bevava mifandraika amin'ny zava-mahadomelina no indrisy fa mahantra mampalahelo mpisolo vaika ny akalana noho ny fitaterana fotsiny ireo zava-mahadomelina mba handoavana ny trosan'ny zanany vavy na ho an'ny fandidiana ny renin'izy ireo.